Emewanye nkwado iji zere mmetụta nke idei mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Mgbanwe ihu igwe, Idei mmiri
Andalusia emetụtala idei mmiri dị egwu n'ihi oke mmiri ozuzo dị ogologo na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ n'ihi nke ahụ Gọọmenti akwadola mgbanwe ụfọdụ na iwu na-ekwe ka ume nzaghachi ikike nke idei mmiri.
Ihe egwu ide mmiri na - emewanyewanye site na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Ọ bụ ya mere gọọmentị ji emejuputa mgbanwe na iwu.
Emeela iwu iji gbanwee ụkpụrụ nke Ngalaba Hydraulic Public na Atụmatụ Hydrological. Mgbanwe ndị a ga-enwe ike ịkọwapụta ala eji eme ihe na mpaghara kachasị adị idei mmiri iji kwado nchekwa nke ndị mmadụ na ihe onwunwe. Na mgbakwunye, mgbanwe iwu na-enye ohere iwusi mmejuputa iwu nke "Ebe obibi na-aga" na nke a ga-enyere nkwupụta nke ọhụrụ mmiri.
Emebela omume ndị a iji mezuo ihe ndị achọrọ ka anyị mee Ntuziaka Okpokoro Mmiri na Ntụle Egwu Iju Mmiri na Nduzi Nchịkwa. Otu n'ime ọrụ emere bụ ịchọpụta ihe ojiji na mmemme ndị kacha emetụta ide mmiri. Site na mgbanwe ndị a, mpaghara ndị a ga - enwe ike ịmegharị ọfụma na nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe, ebe ọ bụ na a ga-akwalite atụmatụ gbasara ohere gbasara ohere zuru oke na nhazi obodo.
Ebubere mgbanwe ndị a ka ọ bawanye nkwụghachi ma si otu a belata adịghị ike nke ebe ndị a tupu oge iju mmiri. N'ihe banyere usoro gburugburu ebe obibi, mgbanwe ndị a na-achịkwa n'ụkpụrụ na-ejigide ọdịdị nke iwu ha dị ka "mmachi na ojiji nke mmiri na usoro nrigbu" ma kọwaa njirisi iji kwe nkwa mmezi, njikwa na nlekota ha.
Ihe dị mkpa nke ịbawanye ọnụọgụ nke mmiri bụ na ha dị mkpa karịsịa iji zere nrụgide a na-enwe n'ebe ụfọdụ na nke ahụ nwere ike imetọ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Increbawanye nkwado iji zere mmetụta nke idei mmiri